Sport Archives · déliremadagascar
FEDERASION’NY KICK-BOXING : Tsy hisy intsony ny kitranoantrano ho an’izay tena mahay
Napetraka amin’ireo mpanazatra sy teknisianina ny fandrafetana ny DTN.
FIFIDIANANA FILOHAN’NY ASIEF: Kandida tokana i Andrianarison John na i John Love
Andrianarison John, filohan’ny ASIEF teo aloha ihany no kandida nanatitra ny ny antontan-taratasy filatsahankofidiana teny amin’ny vaomiera mpikarakara
Nahazo alalana handefa mivantana ny lalao iadiana ny tompondakan’i Afrika – CAN 2022 atao atsy Cameroun ny Startimes.
STARTIMES: Handefa ny “Orange Pro League” mandritra ny 10 taona
Tsy azo jerena ny lalao ara-panatanjahantena rehetra amin’ny faritra telo, Analamanga, Vakinankaratra ary Matsiatra Ambony noho ny fahamailoana
Il est permis de rêver sans en être coupable. A notre connaissance la pétanque et la boxe française
Sport	 2 avril 2022 R Nirina
Napetraka amin’ireo mpanazatra sy teknisianina ny fandrafetana ny DTN. Continuer la lecture →
Sport	 21 janvier 2022 R Nirina
Andrianarison John, filohan’ny ASIEF teo aloha ihany no kandida nanatitra ny ny antontan-taratasy filatsahankofidiana teny amin’ny vaomiera mpikarakara ny fifidianana. Nifarana ny 21 janoary 2022 tamin’ny 4 ora sy sasany ny fara-fanaterana izany. Continuer la lecture →
Nahazo alalana handefa mivantana ny lalao iadiana ny tompondakan’i Afrika – CAN 2022 atao atsy Cameroun ny Startimes. Lalao 51 no handeha mivantana amin’ireo chaîne momba ny fanatanjahantena. Continuer la lecture →
Sport	 19 décembre 2021 R Nirina
Tsy azo jerena ny lalao ara-panatanjahantena rehetra amin’ny faritra telo, Analamanga, Vakinankaratra ary Matsiatra Ambony noho ny fahamailoana ara-pahasalamana. Continuer la lecture →
Sport	 1 novembre 2021 .
NY LASA NAMIRATR’I MADAGASIKARA : Mandra-pandrevirevy ny Barea sy ny Maki
Azo atao tsara ny manonofinofy ary tsisy mahadiso an’izany. Raha tsy diso izahay dia ny taranja kanetibe (pétanque) sy ady totohondry boxe française savate ihany no mbola nisy fandraisantsika Malagasy anjara tamy sehatra famaranana fiadiana tompondaka eran-tany. Ny teo amy tontolon’ny taranja iombonana na sport collectif, dia tsy mbola tafakatra tamin’izany isika, afatsy teo amy taranja basketball vehivavy, efa 50 taona mahery lasa izay.
Niteraka robiroby teto Madagasikara tokoa tamin’izany fotoana izany ny nahazoan’ny ekipa nasionaly malagasy ny amboara afrikana taranja basketball zazavavy, ka nitondrany izany « coupe » avolenta izany nody teto Antananarivo. Tany Lomé Togo no niadiana izany ka nahazoantsika voalohany ny tompondakan’i Afrika. Vokatr’izany, dia Madagasikara no solontena afrikana niady izay ho tompondaka eran-tany natao tany Brésil.
Raha tsy diso ny fitadidianay, dia laharana faha 13 /13 tamin’ireo nandray anjara ny Malagasy, izany hoe farany. Tsy nanafoana ny fiderana an’ireo tovovavy zakan’i Gasikara mendrika ireo izany. Tsy nahasakana ny fientanam-pon’ny vahoaka malagasy tsivakivolo koa, fa tena nanandratra avo ny voninahitr’i Madagasikara izy ireo.
Mandalo eto Madagasikara i Raberanto Nicole, iray tamin’ireo nandrafitra ny ekipa nasionaly tany Brésil. Mila ravinahitra atsy Saint-Denis izy, ary hamangy ny zanany any Toulouse. Mitsidika ny mpiray tampo eto an-drenivohitra, ary anisan’ny tonga nanotrona azy ny mpiara-nilalao tany Brésil Rabakoarivelo Achille. Samy nilalao tao amy CASOI izy mirahavavy ireo ka tsy mifankafoy. Isaorana manokana i Nicole nanaiky ny anterivava natao ho an’ny Délire Madagascar. Continuer la lecture →
Fanohanana fanatanjahantena sy kolontsaina malagasy. Ao anatin’ny vinan’ny Startimes tamin’ity taona 2021 ity ny fanohanana ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Continuer la lecture →
Sport	 4 mars 2021 R Nirina